စာသင်ခန်းများမှ အစပြု၍ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စာသင်ခန်းများမှ အစပြု၍
Posted by pazflor on May 4, 2013 in Creative Writing, Think Different | 17 comments
ဒီနှစ်ပိုင်းတွေ အတွင်းနိုင်ငံထဲ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲအချို့ ကို တွေ့ မြင်ရ၍ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အုံပုံးအကြိတ်အခဲတွေ ဒီနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာ မကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးပေါင်းအများကို ဦးတည်သွားစေလို့ တစ်ဘက်က စိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးရေးပြဿနာတွေ့ပေါ့။
အင်ဒိုနီးရှားမှာ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးဖောက်ဖို့ ကြံစည်သူနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီး လိုက်နိုင်တယ်လို့ကြားပါတယ်။ ဒါအပြင် လူနှစ်ထောင်လောက် ဂျကာတာရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့ မှာ ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအလံနဲ့ သမ္မတဓါတ်ပုံကို မီးရှိူ့ ခဲ့တယ်လို့ strait times မှာဖတ်ရတယ်။ နောက်တရားဟောသူအချို့ က မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကို ‘Holy war’ (မြင့်မြတ်သောစစ်ပွဲ) ဆင်နွဲဖို့ ပြောဆိုဟောပြောကြတယ်ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေတောင် မြန်မာပြည်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အကြမ်းဖက်မှူ့ ဂယက်တွေရိုက်လာမှာစိုးရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
ဒါတွေကြားမိ၊ဖတ်မိရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရတယ်။ ပြောင်းလဲခါစဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဒီအစွန်းရောက်ဝါဒရဲ့  ရိုက်ခတ်မှူ့ ကိုမခံရစေချင်ဘူး။ ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာတွေအားလုံးလည်း အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက ဒီအတိုင်းပြီးသွားမယ်တော့ မထင်ဘူး။
ဒီဘာသာခြားတွေအကြား ဒီလောက်တင်းမာမှူ့တွေ ဖြစ်လာတာ နောက်ခံအကြောင်းအရာပေါင်းစုံတော့ ရှိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဓိက ကတော့ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှူ့ တွေများလွန်းလို့ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်အမြင်တော့ နှစ်ဘက်လုံးမှာ အမှားတွေရှိသလို၊ အစွန်းရောက်မှူ့ တွေလည်းများပါတယ်။ ဒီတော့ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှူ့ နဲ့ နှစ်ဘက်တင်းမာမှူ့ တွေကို လျော့ချရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးလုပ်ဖို့ သေချာစီစဉ်ပြီး အချိန်ယူလုပ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အဓိကကျတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကို ကြည့်ရမယ်ဆို မွတ်စလင်အများစုဟာ မြန်မာလူ့အဖွဲ့ အစည်းထဲကို အံဝင်ဂွင်မကျတာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ဘက်မှာလည်း မြန်မာတွေ အများစု စွဲကိုင်ခဲ့တဲ့ အခြေခံလူမှူ့ ရေး၊ ဘာသာရေးသဘောတရားများဟာ မွတ်စလင်တွေကို တွန်းထုတ်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။
ကျနော်အမြင်မှာ ပြောရရင် ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှူ့ တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ဆိုရင် ခေတ်ပညာကောင်းကောင်းတတ်ရမယ၊် အမြင်ကျယ်ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေ ကောင်းဖို့ အတွက်ဆို့ စာသင်ခန်းတွေကနေ အစပြုရမယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက် ၅နှစ်လောက်ကနေ လူပျိုပေါက်အရွယ် ၁၆၊၁၇ ထိအတွင်းမှာ စာသင်ခန်းတွေ အတွင်းမှာ ကျိုးကြောင်ဆီလျှော်စွာ တွေးခေါ်တတ်ဖို့၊ စာရိတ္တကောင်းမွန်စေဖို့၊ တာဝန်သိစေဖို့ အထူးသင်ကြားပေးရမယ်ထင်ပါတယ်။
အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ဖို့ဆို ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ ပြေးမြင်လိုက်ကြတာ ဘာသာတရားဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရား အထိန်းအကွပ်အဆုံးမနဲ့မှသာ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်မယ်လို့ထင်ကြမယ်။ မြန်မာတွေ အများစုအနေနဲ့ လူကောင်း၊လူဆိုးခွဲရာမှာ ဘာသာတရားရဲ့  စံနှူန်းနဲ့ ခွဲလိုက်ကြတာများပါတယ်။ဒါမို့ ကလေးတွေ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းဖို့ ထိန်းကွပ်ရာမှာတောင် ကျောင်းသင်ရိုးအများစုမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာနဲ့ နွယ်ပြီး သင်ခန်းစာတွေကို ထည့်သွင်းတတ်ကြပါတယ်။ အစိုးရကျောင်းဆိုတာ မြန်မာအများစု ဖြစ်တဲ့ အတွက် မြန်မာဗုဒ္ဒဘာသာ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေကို လိုက်ကြတာများပါတယ်။
ကျနော့ အနေနဲ့တော့ ဒါဟာ လွဲချော်မှူ့ တစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ်။ အသက်တွေကြီးလာတော့မှ တဖြည်းဖြည်း ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ကျောင်းတွေက စပြီးဘာသာရေးခွဲခြားမှူ့ ကို လုပ်လိုက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကဆို ကျောင်းတက်ပြီဆို နိုင်ငံတော်သီချင်းဆို၊ပြီးရင် အားလုံး လက်အုပ်ချီပြီး ဘုရားရှစ်ခိုးကြရပါတယ်။ ဒါဟာ အလယ်တန်းပြီးတဲ့ အထိလုပ်ခဲ့ရတာပါ။ ဘာသာခြားတွေ အနေများတဲ့ ရပ်ကွက်မှာ ကျောင်းတက်ခဲ့ သူငယ်ချင်းကို မေးကြည့်တာတောင် သူတို့ ကျောင်းမှာလည်း ဒီလို လုပ်ရပါတယ် လို့ ဖြေပါတယ်။
ကျနော်တို့ ဘုရားရှစ်ခိုးချိန်ဆို ဘာသာခြားတွေက ငြိမ်ငြိမ်နေ၊ သူတို့ဘုရားကို အာရုံပြူဆိုပြီး ဆရာမတွေက ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ထားပါတော့လေ အဲ့ အချိန်သူတို့ စိတ်ထဲတွေဘယ်လိုခံစားနေရမယ်မသိ။ နောက် အဖြစ်များတာကတော့ များသောအားဖြင့် ကျောင်းတွေမှာ ဘာသာခြားတွေဟာ အနှိမ်ခံရပါတယ်။ သိပ်သိသိ သာသာ မဟုတ်ပေမဲ့ မြန်မာကျောင်းမှာလာတက်တဲ့ ဘာသာခြားအများစုမှာ သိမ်ငယ်စိတ်လေးတွေ ရှိတတ်ကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခုတော့ မသိဘူး၊ အရင်က ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာ ဘုရားအလောင်းတွေ အကြောင်းပါပေမဲ့ ခရစ်တော်၊ မိုဟာမက်၊ အလ္လာအရှင်မြတ်တို့အကြောင်းတော့ လုံးဝမပါတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့တော့ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေ ဘာသာခြားတွေအပေါ်မတရားသလို ဖြစ်နေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ နောက် အခြားဘာသာတွေအကြောင်း လုံးဝမဟတော့ မြန်မာလူမျိုး အများစုမှာ ဗဟုသုတ သိမ်ဖျင်းသွားစေတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ငါတို့ ဘာသာမှ အမှန်ဆိုပြီး မသိလိုက်ဖာသာ စိတ်လေး အောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အတွေးအခေါ်အယူအဆကို တစ်ဘက်ကို စောင်းသွားဖို့ အားပေးလိုက်သလိုမျိုး ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အခြေအနေတွေရှိတဲ့ အတွက် တစ်ဘက်ကကြည့်ရင် ဘာသာခြားမိဘတွေ အနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကျောင်းကို ထားဖို့ ၀န်လေးမိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သူတို့ အနေနဲ့ ကျတော့ သူတို့ သားသမီးကို သူတို့ ဘာသာထဲမှာဘဲ နေစေချင်မှာပေါ့။ ဒါမို့ မြန်မာပြည်မှာ ခရစ်ယန်ဘာသာရေးကျောင်း၊ မွတ်စလင်ကျောင်းတွေ များလာတာလို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ အတိအကျမသိပေမဲ့ အဆိုပါကျောင်းအများစု ဘာသာရေးဖက်ကို စောင်းပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲ့အခါမှာ လူငယ်လူရွယ်တွေဟာ ခေတ်ပညာရပ်များကို သင်ကြားရမဲ့ အစား လွန့်ခဲ့ နှစ်တစ်ထောင်လောက်က အတွေးအခေါ်တွေရဲ့  နောက်ကိုမသိမသာပါသွားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံတကာနဲ့ မျက်ခြေဖျက်အထီးကျန်နေခဲ့သလို၊ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်နေတာပါဘဲ။ ဒီတော့ ဗုဒ္ဒဘာသာရော၊ ဘာသာခြားတွေရော ခေတ်မှီအတွေးအခေါ်အယူအဆ တွေကို လက်မခံနိုင်ကြပါဘူး။
မြန်မာပြည်တွင်းရှိ မွတ်စလင်အများစုကို ကြည့်ရင် အစိုးရကျောင်းထွက်မဟုတ်တာများပါတယ်။ အထက်ပါပြောခဲ့ သလိုဘဲ မွတ်စလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ သီးသန့်ဆန်နေသလိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင်မို့ အစွန်းရောက်မှူ့ တွေများလာသလို့၊ လူအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအကြားနားလည်မှူ့ တည်ဆောက်ဖို့ ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ ပြဿနာတွေ တဖြည်းဖြည်းပြေလည်သွားစေဖို့ မွတ်စလင်များ မြန်မာ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပျော်ဝင်သွားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မွတ်စလင်လူငယ်တွေ အစိုးရကျောင်းတွေမှာ တက်ပြီး ခေတ်ပညာများကို သင်ကြားစေလိုပါတယ်။
ဒီတော့ မြန်မာကျောင်းတွေအနေနဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာအခြေခံပြီးသွားတဲ့ စနစ်ကို ဖျက်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ သင်ရိုး တွေ ပြန်ပြင်ဆွဲရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာသာရေးအကြောင်းပါမယ်ဆိုရင်လည်း မျှမျှတတ ဘာသာအားလုံးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပါစေချင်ပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ချုပ်သူတွေ အနေနဲ့ လည်း ဘာသာရေးခွဲခြားမှူ့ တွေ မဖြစ် ဂရုစိုက်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာလူငယ်တွေ အနေနဲ့လည်း ဘာသာရေးခွဲခြားမှူ့ မလုပ်ဖို့လိုပါမယ်။
မြန်မာမျိုးချစ်တွေကတော့ ကျနော့် အမြင်ကို သဘောတူကြမယ်မထင်ပါဘူး။ သိုသော်လည်း ရေရှည်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းသိမ့်မွေ့ စွာနဲ့ ရှင်းမှရပါမယ်။
မြန်မာပြည်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှူ့တွေ အဆုံးသတ်သွားစေဖို့ စာသင်ခန်းများမှ အစပြု၍ လုပ်ဆောင်ကြပါစို့ လို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
ဘာသာရေးအစွန်းမရောက်ကြဘဲ လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့မြင်ကြပြီး ချစ်ခင်စွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြရင် ငြိမ်းချမ်းဖွယ်ရာပါဗျာ။
ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတော်ဘာသာလို့ သတ်မှတ်ထားတာ မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ကြသူ လူဦးရေ အများစုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသာမို့
မြန်မာကျောင်းတွေမှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဓလေ့ထုံးစံကလွှမ်းနေတာတော့ ဘာသာရေးခွဲခြားမှု့ မဟုတ်လို့ဘဲ ယူဆတယ်ဗျ။ မွတ်စလင်ဘာသာကိုးကွယ်မှု့အများဆုံနိုင်ငံတွေရဲ့ ကျောင်းတွေလည်း မွတ်စလင်ဘာသာ လွှမ်းနေတာဘဲလေ။ အဲလိုဘဲ ခရဇ်ယာန်ဘာသာ အများစုရှိတိုင်းပြည်လည်း ခရဇ်ယာန်ဘာသာ လွှမ်းတာဘဲပေါ့။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဂျီဟတ် စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့တိုက်တွန်းနေကြပြီ ဆိုပါကလား
ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ ။ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်… စာသင်ဖို့ ဆိုပြီး ၊ စစ်ရေးသွားသင်ပြီး ပြန်လာနေတဲ့ ကုလားပေါက်စတွေကိုလဲ တော်တော် သတိထားမိနေတယ် ။
အဲ့ကောင်တွေပုံက ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ပြဿနာ ရှာချင်နေမှန်း အရမ်းသိသာတယ် ။
မြန်မာ ၊ တရုတ် မလေးတွေ ကို မြင်ရင် ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်ပဲ ဖင်တွေ ကို အငမ်းမရ လိုက်ကြည့်တယ် ။ ပါးစပ်ကလဲ သားပြောမယားပြော လူကြားအောင် ပြောတယ် ။
ယောက်ျားကိုတွေ့ ရင် ဘုကြည့်ကြည့်တယ် ။ ရန်လိုတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ရန်ရှာချင်တဲ့ ပုံမျိုး လုပ်ပြတယ် ။
ကျုပ်တို့ တစ်နိုင်ငံလုံးက မြန်မာတွေ မျက်လုံးပွင့်ဖို့ အချိန်ကြပါပြီ ။
ဒါကတော့ အများစုရှိရာ နီးစပ်ရာပဲလေ……….။ ခရစ်ယာန် အများစုရှိတဲ့ကျောင်း ကျတော့လည်း ခရစ်လို ရှင်ခိုးတာပဲ ပြည်နယ်တွေမှာပေါ့ …….။ ကျောင်းအုပ် ဆရာတွေပေါ်မှာမူတည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်….။ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ဖွနေတဲ့သတင်းတွေက ပိုပြီးဆိုးစေတယ်လို့ထင်တယ်….။ ကျနော် ကဗျာ တစ်ပုဒ်ရေးတင်ခဲ့ဖူးပါတယ်…..။ ဒီအမုန်းတရားက အရင်ကတည်းကရှိပြီးသား မီးခဲပြာဖုံးဖြစ်နေတာ လို့ပဲ….။ ဘယ်သူမှ ထပ်ပြီးမွှေးပေးစရာမလိုဘူး ….။ ဆိုလိုတာက မြှောက်ပေးစရာမလိုဘူး လေတစ်ချက်ဟတ်လိုက်ရုံနဲ့ ထတောက်မှာ ….။ အဲဒိတော့ ယပ်တောင်ကိုတောင်မကိုင်မိဖို့လိုတယ်….။
မနေ့က ဖတ်လိုက်ရတဲ့သတင်း . . source တော့ မမှတ်မိတော့ . . ဓာတ်ပုံတော့ သိမ်းထားဖြစ်တယ် . .အဲ့ မှာ Vinyl မှာ ရေးထားတာက . .
WE WANT TO KILL MYANMAR’S BUDDHIS!!!
တဲ့ . . . . ဆန္ဒ ပြနေတာကလဲ မိန်းမ ကြီးအရွယ်တွေနဲ့ ကလေးတွေ နော် . . အရွယ်ကောင်း ယောင်္ကျားလေး တွေ မပါဘူး။ ဆိုတော့ . . . ကျန်တောတော့ သိပ်မပြောချင်ဘူး . . . . အဲ့လိုကြီး ခြိမ်းခြောက်ခံရတာတော့ . . . နဲနဲ စပ်ဖျင်းဖျင်း နေသဗျ . .။ ဂျီဟတ် ကတော့ မြန်မာ ပြည်မှာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ ကျုပ်က ရဲရဲ ကြီးအာမခံ ပါတယ်ဗျို့  . . .။ လူမျိုးရေး အထိကရုဏ်း အတွက် တိကျမှန်ကန် တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တွေထုတ်ပေးနိုင်မယ့် အဖွဲ့ ရယ် .. မလိုက်နာရင် တိကျပြင်းထန် စွာ အရေးယူမယ့် အဖွဲ့ ရယ် . . ဟိုအဖွဲ့ ဒီအဖွဲ့ တွေ ပေါ်လာပါတော့မယ် . . . . . . အဓိက က တော့ . .မြန်မာပြည်သူပြည်သား တွေ စည်းလုံး နေဖို့ပါပဲ . . ဂျာမနီ ကို ဟစ်တလာ ဦးစီး တုန်းကလိုသာ စည်းလုံး လို့ကတော့ . . ချက်ခြင်း ထောင်တက် သွားမယ် . . . . ခုတော့ . . . . အချင်းချင်း ကို စိတ်ဝမ်းကွဲ နေလိုက်ကြတာများ . . . . မြင်မကောင်းဘူး . . . . သံလက်သီးကို ကတ္တီပါအိတ် စွတ်ပြီး လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက် နေကြပုံ များ . . . ဝေ့ါ . . . အန်ချင်စရာ . . . . တော်သေးဘီ . .။
အင်ဒိုက မွတ်စလင်လူဦးရေအများဆုံး၊ နောက် လူဦးရေးများပြီး ဆင်းရဲတော့ အစွန်းရောက်သူပေါပုံများပါတယ်။ သူတို့ရဲ့  attitude ကတော့ တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာဘဲ။
” ဆင်းရဲတော့ အစွန်းရောက်သူ များပါတယ် ”
လူနည်းစုက လူများစုနဲ့ ညှိပြီးနေမှ အဆင်ပြေတာ သဘာဝပဲ…
အဲသည်သဘာဝက ချိုချင် ချိုမယ်၊ ခါးချင်ခါးမယ်
သဘာဝ ကတော့ သဘာဝပဲ…။
ဖြစ်သင့်တာက လူနည်းစုက ကိုယ့်လူနည်းစု အခွင့်အရေးကိုလဲ ရအောင်ယူရင်း
တဖက်ကလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူနည်းစုမှန်း အမှန်အတိုင်းသိပြီး
လူများစုရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံ နေထိုင်မှု့ပုံစံတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားသင့်တယ်။
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်ဘာသာတွေ သာသနာပြုရာမှာ
အလွန်အကျွံ ထိခိုက် တာတွေ အများကြီးမှ ပြောမကုန်နိုင်အောင် လက်ညှိုးထိုးမလွဲရှိတယ်။ ရှိခဲ့တယ်။ ကျုပ်မှာ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းခွေတောင်ရှိဘူးတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ကာလ တစ်လျှောက်လုံး ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကြောက်လဲကြောက် နိုင်လဲမနိုင်လို့ အောင့်ခံလာခဲ့တာတွေ
အခုမှ စုမိပြီး ပေါက်ကွဲတာမျိုးမဖြစ်အောင်-
ဘယ်သူမှ မီးမတို့ကြပါနဲ့၊ မီးမတို့ကြပါစေနဲ့လို့ ဆန္ဒပြုမိပါတယ်…..။
မေါင်းထောင် ကလဲ မေါင်းထောင် ၊ မြေဇင်း ကလဲမြေဇင်း ပါပဲ ။
အခုတလော အဘ လည်း ခံနေရတဲ့ မွတ် ဘာသာဝင် ကုလားတွေဖက်က ၊
စာနာမူ တွေ ၊ လူ့အခွင့်အရေး တွေအရ ဝင်ပြောရေးပေးနေတာ သိကြမှာပါ ။
ဒါပေမယ့် ၊ သိပ်မကြာခင် အချိန်တုန်းက ၊
အဘ မြို့ထဲဘက်ကို သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ကားနှင့် သွားကြပါတယ် ။
အဲဒီမှာ သူငယ်ချင်း က လမ်းကြုံလို့ဆိုပြီး အောင်ဆန်းကွင်း တစ်ခြမ်းပဲ့ ဗလီ ဘေးက ၊
ရွှေ – – – – ကြီး လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ဝင်သောက်ကြပါတယ် ။
သူငယ်ချင်း က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာစစ်စစ် သူဋ္ဌေး ပါ ။
အဲဒီ့ အချိန်ဟာ ကုလား ဗမာ ကိစ္စ နေရာအနှံ့မှာ ဖြစ်ပြီးခါစပါ ၊
၉၆၉ တွေ အရမ်း အားကောင်းပြီး ၇၈၆ ဆိုင်တွေကို အားမပေးတော့တဲ့ အချိန်ပေါ့ ။
အဘ တောင် စိတ်ထဲက ” ဟင် ” ကနဲ တစ်ချက်ဖြစ်သွားသေးတယ် ။
အဘ က ငယ်စဉ်ကတည်းက ဒန်ပေါက် ကို ကြိုက်ပေမယ့် အားမပေးတာ နှစ် ၂၀ လောက် ရှိပါပြီ ။
ဒါပေမယ့်လည်း ၊ သူငယ်ချင်း က ဆိတ်စွပ်နံပြား ကောင်းကောင်း စားချင်တယ် ၊
လမ်းကြုံတယ် ဆိုလို့ ၊ ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ပဲ ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ် ။
၉၆၉ စနက်ကြောင့် အဲဒီ လဘက်ရည်ဆိုင် ထဲမှာလဲ လူ မစည်လှပါဘူး ။
အဘ သူငယ်ချင်း က ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်း သိသာစေမယ့် နဝရတ် လက်စွပ်ကြီး တဝင်းဝင်း ၊
အဘ ကလည်း တရုတ် မျက်နှာပေါက် နှင့်ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်း အသိသာကြီးပေါ့ ။
အဘတို့ ဝင်လာတော့ ဆိုင်ရှင်က ( အသိအမှတ်ပြုပုံပါပဲ ) ပုံမှန်ထက် နဲနဲပို ဂရုစိုက်ပေးပါတယ် ။
( ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထဲက စိတ်ထား သင့်တင့်လို့သာ ၊ မွတ်ဆိုင် လာအားပေးတာလေ )
အဲ ဒါပေမယ့် ခဏလေးကြာတော့ ဗလီက ဆင်းလာတာ ထင်ရတဲ့ ၊
ဦးထုတ်ဖြူလေးတွေ ဆောင်းထားတဲ့ ၇၈၆ လူငယ် ၄ / ၅ ယောက် ၊
အဘ တို့ဘေးနားက စားပွဲဝိုင်း လာထိုင်ပါတယ် ။
ခဏကြာတော့ ၊ အဲဒီထဲက ၇၈၆ လူငယ် တစ်ယောက်က ၊
သူ့ခြေထောက်ကြီးကို ဒူးလောက်မြင့်တဲ့ ခုံပေါ်တင်လိုက်ပါတယ် ။
ခြေထောက် ဦးတည်တာကလဲ အဘတို့ ဝိုင်းဖက်ဆီကိုပေါ့ ။
အဘ နှင့် အဘ သူငယ်ချင်း က နိုင်ဂျန်ဂါးကို ဂဒီးဂဒီး သွားနေတဲ့သူတွေ ဆိုတော့ ၊
ဒါမျိုးတွေအပေါ် ခံစားချက် သိပ်မရှိပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အမြင် အရတော့ အဲဒါဟာ ရိုင်းတာပေါ့လေ ။
( အထူးသဖြင့် ဒီလို အချိန်ကြီးမှာ ၊ မွတ်ဆိုင်ကို လာအားပေးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလေ )
အဘ စဉ်းစားကြည့်တယ် ၊ ငါတို့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှန်းသိလို့ ၊
တမင်များ ရွဲ့ပြီး လုပ်နေသလားပေါ့လေ ။
သဗ္ဗေ သတ္တာ ၊ ကမ္မသကာ ပါပဲလေ ။
ဟုတ်တာက ဟုတ်ပါတယ် အဘရေ၊ မွတ်စလင်တွေ ဗလီနဲ့ ဝေးမှဘဲ ရန်လိုစိတ်တွေနည်းလာမယ်ထင်ပါတယ်။
ခရစ်ယန်နဲ့အစ္စလမ်ဘာသာသာသနာဟာ.. စကတည်းကကို.. ထိခိုက်မှုများစွားနဲ့.. စစ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ..
အကျိုးဆက်က.. အခုထိ.. ခရူးဆိတ်စစ်.. ဆက်ဖြစ်နေတာပါပဲ..။
ဒီလိုပြောလို့.. တဖက်ကဘာလုပ်လုပ်.. သည်းခံရမယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး..
အတိုင်းအတာ.. အတိုအရှည်အရ.. တုံ့ပြန်ဖို့ပါပဲ..။
လူ့သက်တမ်း.. တသက်၂သက်နဲ့.. ပြီးသွားမယ်မဟုတ်ပါ…။
စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ဘုရားစင်ထားခြင်း၊ ဘုရားရှိခိုးရခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ အခါကြီးနေ့တွေကို အစိုးရရုံးပိတ်ရက် သတ်မှတ်ပေးရခြင်းဆိုတာတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတောင်ဘာသာသတ်မှတ်ခြင်းဥပဒေထဲက အချက်တွေပါ။ နိုင်ငံတော်ဘာသာဥပဒေကို မဖတ်ရသေးလို့ သေချာအသေးစိတ်မပြောနိုင်ပေမယ့် မကြာခင်မှာ ပြောပြပေးပါ့မယ်…
နှစ်ပေါင်း၂၆၀၀ လောက် ရှည်ကြာအောင် တည်ရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ၁၉၆၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် သမ္မတ မန်းဝင်းမောင်ကိုယ်တိုင် လတ်မှတ်ထိုး ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အခြားဘာသာတွေကိုလည်း လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်း ကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် human rights တွေဘာတွေ ဘယ်လိုပဲပြောပြော ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် တရားဝင်ပြဌာန်းထားတဲ့နိုင်ငံမှာ၊ နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ကျော် သက်တမ်းရှိနေတဲ့ နိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်လောက်ကမှ ရောက်လာတဲ့ ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ အိမ်ရှင်ဘာသာနဲ့ အဆင်ပြေအောင် နေစေချင်ပါတယ်… ဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကမှ ခရစ်ယာန်ဆိုပြီး၊ အစ္စလာမ်ဆိုပြီး မနှိမ်ခဲ့ကြပါဘူး.. ဒါကြောင့်လည်း သူတို့တွေ ဒီအချိန်မှာ ဒီလိုကြီးပွားနေနိုင်ကြတာပါ.. တစ်ခုပဲ…နှိမ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေက နှိမ်တယ်ဆိုရင်တောင် ဘာသာရေးအရနှိမ်တာမဟုတ်ဘဲ အောက်ခြေလူတန်းစားကုလားအဖြစ်နဲ့ နှိမ်ကြတာဖြစ်မယ်လို့ မြင်ပါတယ်… ဘာသာ (၄) မျိုးကို ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာ သင်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ အစ္စလာမ်နိုင်ငံကြီးတွေမှာ အဲလိုသင်ခွင့်ပေးမယ့်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာသင်ဖို့ကို ရှေ့ဆုံးကထွက်ပြီး ထောက်ခံပေးပါမယ်လို့….
” ဒါကြောင့် human rights တွေဘာတွေ ဘယ်လိုပဲပြောပြော
ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် တရားဝင်ပြဌာန်းထားတဲ့နိုင်ငံမှာ ”
လက်ရှိ အသက်ဝင်နေတဲ့ ဥပဒေ တွေထဲမှာ ၊
ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော် ဘာသာ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာ မရှိပါဘူး ။
မှန်မှန် ကန်ကန် ၊ တိတိ ကျကျ ပြောရရင် ၊
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ နိုင်ငံတော် ဘာသာ လုံးဝ ( လုံးဝ ) မဟုတ်ပါဘူး ။
ဟုတ်..အဘဖော..မနက်ဖြန်ကျရင် တင်ပေးပါမယ်… အကျဉ်းလေးပေါ့…
အသက်မ၀င်တာတော့အမှန်ပါ… ဒါကြောင့် အသက်ဝင်လာအောင် ပြန်လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်… တတ်နိုင်သလောက် တင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်…
GavialGirl ခင်ဗျာ နိုင်ငံတော်ဘာသာကို ဗုဒ္ဒဘာသာအဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့ အဆိုပြုခဲ့လို့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဆန့်ကျင်တာ အတော်ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။ အခုလိုအခြေအနေမှာ ပြန်လုပ်မယ်ဆို ပိုဆိုးသွားမယ်ထင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာဘာသာရပ်ကြီးတွေကိုတော့ ကျောင်းတွေမှာ ဗဟုသုတအဖြစ် သင်ကြားတာတော့ ဖြစ်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာလူငယ်တွေ အနေနဲ့ ဗဟုသုတရှိထားသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
ဟိုဘက်က လူအခွင့်အရေးမရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့တော့ မယှဉ်စေလိုပါဘူး။ အမျိုးသမီးလို ခေါင်းမီးခြုံ အနှိမ်ခံနေရတဲ့ နိုင်ငံမျိုးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ယှဉ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဒါမို့ အစွန်းမရောက်စေလိုပါ။
ဘယ် ကိစ္စ မဆို အစွန်း ရောက်သွားတာနဲ့
အဲဒါ ချောက်ထဲ ပြုတ်ကျ တော့မှာ
ဖတ် ရှု လေ့လာ သွားပါကြောင်း
အဘ ငယ်စဉ် အခါတုန်းက ၊
ဟိုးခေတ်တုန်းက နာမည်ကြီးကျောင်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တဲ့ TTC မှာတက်ဘူးတယ် ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်တိုင်း ဘုရားခန်းထဲမှာ ကျောင်းသား အားလုံးစုပြီး ဘုရားရှိခိုးရတယ် ။
သြကာသလောက်နှင့် မရဘူး ၃၈ ဖျာ ပါရွတ်ရတာ ။
အဘ ကတော့ ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ ပဲရတော့ ၊ အဲဒါပဲ လိုက်ရွတ်တယ် ၊ ဟီ ဟိ ။
ခရစ်ယာန်တွေ မွတ်တွေ တက်စရာ မလိုဘူး ၊ အတန်းထဲမှာ ဆော့နေလို့ရတယ် ။
အဲဒီတုန်းက ၊ သူတို့တွေကို သိပ်အားကျတာပဲ ။